Fanampenam-bava · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Fanampenam-bava
Mpanoratra Malayziana iray miatrika fanadihadiana noho ny fanevatevana tao amin'ny ranty Facebook
Azia Afovoany sy Kaokazy4 herinandro izay
Tantara mikasika ny Fanampenam-bava
Tamin'ity herinandro ity isika mitodika any Shina, India, Colombia, Indonesia ary Serbia hihaino avy amin'ireo mpanao gazety/mpikaoka momba ireo fanamby atrehin'ny fampitam-baovao any amin'ireo firenena ireo.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Avrily 2022
Eoropa Afovoany & Atsinanana 12 Avrily 2022
Notohizan'i Shanghai ny fihibohana na dia mitaraina, lany vatsy sy mikorontana aza ny vahoaka,
Azia Atsinanana 12 Avrily 2022
Ao anatin’ny fisavorovoroana ny tanàndehibe satria maro ny mponina ao anatin’ny fihibohana no lany sakafo, tsy mahazo fikarakarana ara-pahasalamana mahazatra, ary sahirana amin'ny fividianana entana ilaina andavanandro.
Podcast: Inona ny Unfreedom Monitor?
Fahalalahàna miteny 11 Avrily 2022
Mihaino an'i Nanjala Nyabola, Talen'ny Advox milaza momba ny tetikasa fikarohana nataony, Unfreedom Monitor isika amin'ity herinandro ity.
Atolotry ny Global Voices Advox ho anao ny tetikasany vaovao “The Unfreedom Monitor”
Fahalalahàna miteny 08 Avrily 2022
Ny The Unfreedom Monitor dia fisantarana andraikitra mamakafaka ny fitomboan-trangan-tsirefesimandidy mitambajotra na ankihy. Avoitran'ny tatitra tany am-piandohana ireo kasinga mitarika anakany amin'ny fielezany.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 02 Avrily 2022